Malunga nathi - Ningbo Madacus Printing Co., Ltd.
NIngbo Madacus Printing Co., Ltd. inikezela ngokhuphiswano lokuprinta kunye nokupakisha iinkonzo ngaphezulu kweminyaka engama-20, sigxila ekuprinteni iincwadi, iimagazini, iincwadana kunye neebhokisi zokupakisha, ezinokufuna okuphezulu, besisoloko sihlangana kwaye sigqithile kwiimfuno zabathengi.
Ukuprinta kukaMadacus iivenkile zokushicilela ezinezixhobo ezifanelekileyo, ezona zixhobo ziphambili zokuprinta eJamani Heidelberg kunye neenkqubo ezingqongqo zeQC. Siphumelele uphicotho lweFSC kunye neBSCI. kwaye ugcine ukubonelela ngokugqibeleleyo nangokufanelekileyo ngenkonzo yokumisa enye kunye nokupakisha, kunye nokuhanjiswa okukhawulezayo kwihlabathi liphela.
Ukwenza ngokwezifiso kunye noMboneleli weSisombululo ukuguqula umbono wakho ube yinyani
Umgangatho onokuthenjwa ngexabiso lokwenyani
Imigca yemveliso ephambili yoomatshini, Inkqubo engqongqo yeQC, Imveliso yasimahla ebonwayo
Ukupasa i-BSCI kunye ne-FSC
Ukuphendula ngokukhawuleza kweeyure ezingama-24, iimveliso zithunyelwa kwiiveki ezi-2 ukuya kwezi-4, ezona nkonzo zibalaseleyo emva kokuthengisa
Sibambelela kwifilosofi yeshishini "yophuhliso oluqhutywa kukuyila" kwaye ngoku sinezixhobo zemveliso zanamhlanje ezifanelekileyo kunye nezixhobo ezixhasayo. Sazisa ikakhulu iHeidelberg XL75-8F, XL75-6 + LF quarto 6 + 1 Printa Press, super Master CD102-4Preset Plus, Xiaosen G40-5 color pair boot itotali yoomatshini bokushicilela aba-4. Ukusuka kuyilo, ukwenza ipleyiti, ukuprinta, ubhedu, i-lamination, ukusika ukusweleka, umgaqo wokudibanisa umgca wemveliso enye.
Ukujongana nexesha elihlala litshintsha kuphuhliso lwenzululwazi kunye netekhnoloji, ngelixa liqhubeka ngokungenisa izixhobo eziphambili kunye netekhnoloji, inkampani yethu iazise iitalente zolawulo ezikumgangatho ophezulu kunye nabasebenzi abaqeqeshiweyo nabanobuchwephesha, ngokusekwe eShanghai, ejongene nehlabathi, eyandisa amazwe ngamazwe, Imakethi ifezekisa imeko yokuphumelela kunye nabathengi ngowona mgangatho ubalaseleyo, eyona nkonzo ilungileyo kunye nexabiso elifanelekileyo. Ukuzinikezela kunye nobuchwephesha yibhulorho phakathi kwethu nabathengi bethu!
Siza kunika isithembiso sethu ngexesha lokuqala, ukuhanjiswa ngexesha, umgangatho olungileyo, ixabiso elikhuphisanayo yingqondo yethu yenkonzo. Sijonge phambili ekubeni nentsebenziswano kushishino lwexesha elide kunye nomthengi ovela kwihlabathi liphela, Nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi ngolwazi oluthe kratya.